Tag: njikọ emailin | Martech Zone
Kpido: email nke jikọrọ
You no na 1% nke LinkedIn?
Mọnde, Febụwarị 11, 2013 Sunday, Jenụwarị 15, 2017 Douglas Karr
Ọnụ Ọgụgụ. Mgbe ụfọdụ ha na-akwanye m akụ. Taa bụ nnukwu ihe atụ. LinkedIn wepụtara email na-ekele ndị otu ha nọ na pasent kachasị elu nke profaịlụ elere anya. Nke a bụ isi… profaịlụ anya. Nke a bụ ihe email anya dị ka… Ekele nke enyi Daren Tomey: Daren bụ ike-chaja na nnọọ m 1% klọb nke ahịa uloru gburugburu mba. Agaghị m anapụ ya nke ahụ. Ajụjụ bụ gịnị kpatara